अन्य भाषामा भाषण को भागहरु बीच हाइफन। लेख्नका लागि नियम
त्यसैले अक्सर, तर अझै पनि कहिलेकाहीं तपाईं अन्य भाषामा भाषण को भागहरु बीच हाइफन राख्न छन्। तपाईँको ध्यान सामाग्री समर्पित के प्रस्ताव गरिनेछ छ।
केही परिस्थितिमा यसलाई अन्य भाषामा भाषण को भागहरु बीच हाइफन राख्न आवश्यक छ। रूसी भाषा यस्तो अवस्थामा शासन भनेर केही नियमहरू छ। त्यहाँ यस्तो आवश्यकता छ, एक विस्तृत उदाहरण विचार गर्नुहोस्। तपाईं ध्यान पहिलो कुरा, यो हाइफन छ। यो शब्द अर्थोग्राफिक साइन एक मिश्रित शब्द को भाग रूपमा भागहरु को जुदाई को लागि अभिप्रेरित एउटा सानो तेर्सो संकेत कि पत्र भनिन्छ। यो कागज मा हामी अन्य भाषामा भाषण को भागहरु बीच हाइफन राख्नु गर्दा विचार गर्नुहोस्।
त्यसैले, अन्य भाषामा भाषण को भागहरु बीच हाइफन तिनीहरूले विशेषण र सर्वनाम PO संग पूर्व फिक्स देखि व्युत्पन्न छन् र शब्द प्रत्यय -emu, -th, -ku, को, -rm बनेको गर्दा राख्नुभयो। आफ्नो राय मा, लडाई मा, गर्मी मा के लाग्छ, एक सर्प जस्तै: यहाँ यो लेखन सम्भावित उदाहरण हुन्। यी अवस्थाहरूमा, यो त्यहाँ hereinabove वर्णन एक उपसर्ग PO र प्रत्यय हो भनेर देखेको छ।
दोस्रो समूह उपसर्ग बी (VO) संग ORDINAL संख्या देखि व्युत्पन्न छन् जो क्रियाविशेषणसमावेशगर्नुहोस् सक्छ। यहाँ केही उदाहरणहरू छन्: दशौं, दोस्रो मा, पाँचौं, पहिलो। उदाहरण: पहिलो स्थानमा, दोश्रो सावधान, र, वरिपरि हेर्न, र तेस्रो, एक seatbelt लगाउने।
पारंपरिक नामित तेस्रो समूहमा क्रियाविशेषण अपरिभाषित प्रकारका, जो प्रत्यय -So, एकदिन, वा-वा उपसर्ग Koi / koe समावेश समावेश गर्नुहोस्। अन्य भाषामा भाषण को भागहरु बीच हाइफन संग आधारभूत हिज्जे उदाहरण: कहीं, कहिलेकाँही, कहीं, कहिलेकाँही, कतै, कुनै तरिका, केही कारण केहि। उदाहरणका लागि: dripping माथि बाट।
चौथो, कण-taki को बोलियों हाइफन राख्नु, र शब्द सबै नै। यहाँ यस्तो उदाहरण हो: अन्तमा, सबै पछि, एउटै बस, त्यसैले नै।
पाँचौं, यस हाइफन अन्य भाषामा एक वर्दी आधार संग एक शब्द दोहोराएर गठन जुन मा राखिएको छ। अन्य भाषामा भाषण को भागहरु बीच हाइफन संग लेखन को निम्न उदाहरणहरू विचार गर्नुहोस्: चुपचाप (धेरै शान्त - अर्थ), लामो समय पहिले (एक धेरै लामो समय), बलियो बलियो (धेरै बलियो)। उदाहरणका लागि: म लामो समय पहिले पुरानो युगल बस्ने गरेका छन्।
एउटै समूहमा एक साधारण जग संग क्रियाविशेषणसमावेशगर्नुहोस्, तर उपसर्गको र प्रत्यय, अर्थात्, शुद्ध सफा, धेरै दृढ, धेरै कम से कम, राम्रो समय मा एक किसिम द्वारा जटिल। उदाहरणका लागि: राम्रो समय मा तपाईं प्राप्त; यो पद कस सम्झना। यो उदाहरणबाट यो हाइफन देख्न सकिन्छ। खैर, अन्य भाषामा भाषण को भागहरु बीच एक ड्यास लागू हुँदैन। यो एक विराम चिन्ह छ शब्दहरू वा वाक्य को भागहरु अलग एक लामो तेर्सो ड्यासहरू को रूप मा।
एक पछि लेख्ने सँगै, तिनीहरू छोटो विशेषण देखि गठन हुँदा उपसर्ग संग बोली को वर्णन भाग: यस मामला मा, तपाईं ध्यान यस बिन्दु तिर्न गर्नुपर्छ। उत्तिकै, सानो सानो द्वारा: यहाँ केही उदाहरण हुन्। रोटी को एक आवारागर्दी ~ हामी उत्तिकै साझा।
थप नयाँ पनि सँगै बोली भाग विशेषण नाम को तुलनात्मक डिग्री देखि गठन जो को शब्द लेखिएका छन्। मलाई एक बडा भाग दिनुहोस्। म नयाँ पुस्तकहरू प्राप्त गर्न चाहन्छु।
त्यसैले (कि सर्वनाम देखि गठन), किनभने (को सर्वनाम देखि गठन), त्यसैले (यो सर्वनाम द्वारा): र उपसर्ग संग लेखिएको छ एक शब्द केही सर्वनाम po-।
समानता र मतभेद
निम्न वास्तवमा विशेष ध्यान: तपाईं बारी मा, सहायक फारामहरू र निस्क्रियगर्नुहोस् संज्ञा समावेश जो adverbial संयोजन देखि, आवश्यक hyphenated छन् जो एक adverb, भेद गर्न सक्षम हुनुपर्छ। यस्तो संयोजन अलग लिखित गर्नुपर्छ। एक सर्प एक सर्प, सम्मान सम्मान, बादल बादल, ब्वाँसो ब्वाँसो, लडाई आगो, दर्जा मा बढुवा: यहाँ यस्तो उदाहरण हुन्।
तपाईं hyphenate चाहनुहुन्छ कि एउटै शब्द दोहरो गरेको भाषण को भागहरु, को निम्न प्रकार तुलना गर्नुहोस्। यी शब्दहरू nouns देखि व्युत्पन्न छन्: सेतो-सेतो, हल्का-हल्का, कालो-कालो। यस मामला मा अन्य भाषामा भाषण को भागहरु बीच हाइफन राख्न आवश्यक छ।
दुनिया मा coldest शहर Yakutia स्थित
जीव को दृश्य को बिन्दुबाट जीवन के हो तपाईंलाई? "जीवन" को परिभाषा
देशमा को सबै भन्दा ठूलो र सानो बासिन्दाहरू
अर्थव्यवस्था के हो? प्रकार र अर्थव्यवस्था
तारा - आफूलाई उजाला कि आकाशीय शरीर
आहार "7 दिन": पिउने दिन। सात दिन लागि आहार पिउने: विशेषताहरू, मेनुहरू, परिणाम, टिप्पणीहरू
मल्टीवार्कमा मटर कसरी कुकिन्छ
VAZ-2110 मा ठंडा रेडिएटर को प्रतिस्थापन। निर्देश, प्रतिस्थापनको कारणहरू। उपकरण र रेडिएटर को सिद्धान्त
दबाइ "Karipain अल्ट्रा" (जेल): समीक्षा, निर्देशन, सङ्केत गर्छ